Kulankii fogaan-aragga ahaa ee Biden iyo Xi
Ka hor intii uusan bilaaban kulankoodii xagga fogaan aragga ahaa Madaxweyne Joe Biden iyo Madaxweyne Xi Jinping ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha bishii November 15-keedii, ayaa labada hoggaamiye waxay muujiyeen rajada ay ka qabaan in doodda ay noqoto "mid daacad ah," "toos ah," oo "dhammaystiran."
Rajadooda ayaa u muuqata inay rumowday.
Bayaan uu soo saaray Aqalka Cad ayaa lagu yiri, “Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay xiriirka adag ee labada dal iyo muhiimadda ay leedahay in si xilkasnimo leh loo maareeyo tartanka. Madaxweyne Biden waxa uu soo dhaweeyay fursadda uu si daacad ah oo toos ah ula hadlo Madaxweyne Xi waxa ku saabsan ujeedooyinkayaga iyo mudnaantayada ee arrimo badan oo kala duwan.”
Arrimahaas waxaa ka mid ahaa welwelka Mareykanka ee ku saabsan dhaqamada PRC ee Xinjiang, Tibet, iyo Hong Kong, iyo sidoo kale xuquuqda aadanaha; Baahida loo qabo in la xaqiijiyo in “xeerarka dariiqa” ee qarniga 21-aad uu horumariyo nidaam caalami ah oo xor ah, furfuran oo caddaalad ah; Muhiimadda xorriyadda socodka iyo duulista badbaadada leh ee barwaaqada gobolka Indo-Pacific; baahida loo qabo in laga ilaaliyo shaqaalaha iyo warshadaha Maraykanka ganacsiga iyo dhaqamada aan cadaaladda ahayn.
Dhanka Taiwan, Aqalka Cad wuxuu yiri, "Madaxweyne Biden wuxuu hoosta ka xariiqay in Maraykanku uu weli ku sii socdo in uu sii wado siyaasadda ah 'hal Shiine', oo uu hagayo Xeerka Xiriirka Taiwan, saddexda war-murtiyeed ee wadajirka ah, iyo lixda ballanqaad, iyo in Maraykanku si adag uga soo horjeedo dadaallada midaysan ee lagu doonayo in lagu beddelo xaaladda hadda taagan ama lagu wiiqayo nabadda iyo xasilloonida guud ahaan marin biyoodka Taiwan.”
Sidoo kale waxaa laga wada hadlay muhiimadda ay leedahay in la maareeyo khataraha istiraatijiyadeed iyada oo la samaynayo ilaalin caqli-gal ah si loo hubiyo in tartanka u dhexeeya Maraykanka iyo PRC aanu u leexin iska hor imaad iyo in khadadka xiriirka furnaadaan.
Intaa waxaa dheer, Madaxweyne Biden wuxuu kala hadlay Madaxweyne Xi sidii loo wada shaqayn lahaa, anagoo ah hoggaamiyeyaasha labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka, meelaha ay danaheennu isku waafaqaan, sida amniga caafimaadka adduunka, ka hortagga daroogada, iyo isbeddelka cimilada.
Lataliyaha Amniga Qaranka ee Maraykanka Jake Sullivan, oo ka qayb galay kulanka, ayaa ku tilmaamay kulan dhex maray laba hoggaamiye oo "labadaba aqoonsan miisaanka mas'uuliyadda ee maaraynta xiriirka Maraykanka iyo Shiinaha ... Waxay eegayaan in ay si xilkasnimo ah u xambaaraan miisaankaas, si ay u daryeelaan erayada ay adeegsadaan, qaaciddooyinka ay qaataan, arrimaha ay soo bandhigaan.” Si kastaba ha ahaatee, Mr. Sullivan waxa uu xusay, in Madaxweyne Biden uu si cad u sheegay in “si wada jir ah anagoo kaashanayna xulafadayada iyo asxaabtayada iyo kuwa wadaaga qiyamka dimuqraadiga ah...Waxaanu ka shaqayn doonaa aragti. Aan liddi ku ahayn Shiinaha, laakiin aragti dhab ah oo ku saabsan nidaam caalami ah oo weli ah mid xor ah, furfuran oo caddaalad ah."
Taasi waxay ahayd aragti ka tarjumaysa aragtida dawladda Maraykanka.